Basikety: misongadina ny MB2 All sy ny FFPro BCTM | NewsMada
Basikety: misongadina ny MB2 All sy ny FFPro BCTM
Mitohy hatrany, ao amin’ny kianja CEG sy ao amin’ny kianja monisipaly ao Farafangana, ny fifaninanam-pirenena, sokajy U16 lahy sy vavy, taranja basikety. Anisan’ny misongadina aloha, hatreto, taorian’ny andro fahatelo, ny ekipan’ny MB2 All Analamanga, lahy sy vavy, sy ny FFPro BCTM lehilahy. Tsy mbola tojo faharesena mantsy izy ireo, teo amin’ireo lalao efa vitany.
Raha tsiahivina, teo amin’ny lehilahy, resin’ny MB2 All, tamin’ny isa mazava 87 no ho 27, ny AS Fanorolahy Atsimo Atsinanana, teo amin’ny andro voalohany ary tamin’isa tery, 50 no ho 48, ny nanilihany ny ESF River’s avy any Analanjirofo, ho an’ny andro faharoa. Fihaonana niady ary nampitsanga-mitoetra hatramin’ny farany. Teo amin’ny andro fahatelo, notanterahina ny talata lasa teo, nomontsanin-dry zalahy, tamin’ny isa mazava 74 no ho 47, ny ABBCM Alaotra Mangoro. Nahazo fandresena telo toy izany koa ny ny FFPro BCTM Vakinankaratra. Samy manana isa enina ny ekipa roa tonta hatreto, saingy manantombo eo amin’ny “goal average” ny ekipan’Antsirabe, mitarika vonjimaika ho an’ny sokajy “D”. Faharoa manaraka azy izany ny MB2 All Analamanga.
Ho an’ny tovovavy, fandresena intelo misesy ny azon’ny MB2 All, nanoloana ny Ascut Atsinanana, tamin’ny isa 59 no ho 36, avy eo nandavo ny Fandrasa Matsiatra Ambony, tamin’ny isa 41 no ho 32, ary nanilika ny Sepa Bongolava, tamin’ny isa 46 no ho 19. Mitarika amin’ny isa enina ny tovovavin’Analamanga, ho an’ny sokajy “B”.